पैसा कमाउने केही टिप्सः जसले तपाईं रातारात बन्नुहुनेछ धनी ! – Sanjal Nepal
Homeरोचकपैसा कमाउने केही टिप्सः जसले तपाईं रातारात बन्नुहुनेछ धनी !
January 2, 2021 admin रोचक 3857
काठमाडौँ । पैसाको आवश्यकता सबैलाई पर्छ । अनि संसारमा सबैको चाहना हुन्छ कसरी धेरै पैसा कमाउने ? अझ हाम्रो समाजमा त पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा दिइन्छ ।
शुरुमा तपाईंले आफुलाई चिन्नु जरुरी छ। त्यसैले तपाईं पहिले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस्। र त्यसैअनुसार काम गर्नुहोस्, त्यसले तपाईंलाई सफलताको शिखरमा पुग्न सहयोग गर्छ। तपाईले मनदेखि नै गरेको काम तथा क्षमताको पहिचानले मात्रै तपाई‌ले खोजेको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
यो कुरा बुझ्नुस् कि बिना परिश्रम सफल हुन सहज छैन । त्यसैले मेहनत गर्नुहोस्, निरन्तर परिश्रम गर्नुहोस्। एक दिन तपाईं सफल बन्नु हुनेछ । र पैसा आफैं तपाईंको पछि दौडनेछ ।
त्यसो त पैसा कमाउन कसलाई मन लाग्दैन र रु तर दुई नम्बरी धन्धा नगरी सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ र रु भन्नेहरु पनि नभएका होइन्, तमाम भेटिन्छन् बजारमा । उनीहरुका लागि जवाफ दिन सकिन्छ( अवश्य सकिन्छ ।
अर्काको देखासिकी गरेर पैसा खर्च नगर्नुस् । पैसा उडाउने खालका साथी छन् भने तिनीहरूको संगत छोडिदिनुस् । तपाईंको पैसामा अरूलाई किन मोज गराउनुुहुन्छ रु पैसा बचाउनु पनि पैसा कमाउनु नै हो ।
आफूलाई चाहिने कुरा मात्र किन्नुस् । जे किन्दा पनि अत्यन्त आवश्यक छन् कि छैनन् भनी विचार गर्नुपर्छ । केही नयाँ कुरा सिक्नुस् । आफूसँग भएका क्षमता तिखार्नुस् ।
यसरी नयाँ कुरा सिकेपछि तपाईंले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ । मानौं तपाईंले चित्रकला सिक्नुभयो रे, त्यो बेचेर पैसा आउँछ ।
घरमा भएका पुराना सामान बेचिदिनुस् । घर भरिने गरी सामान थुपार्नुको के अर्थ रु सामान बेच्दा पैसा पनि हुने, घर पनि सुन्दर देखिने । कमाइभन्दा कम खर्च गर्नुस् । आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपैयाँ गरेर काम छैन । क्रेडिट कार्डको लत जति छिटो छुट्यो, त्यति राम्रो ।
यि युवतिले Live भिडियो मा यस्तो हर्कत गरे पछि.. (पूरा भिडियो हेर्नुहोस)
January 11, 2021 admin रोचक 7222
अधिकाँश जो’डीलाई अवलोकन गर्दा उनीहरुबीचमा उमेरको अन्तर हुन्छ । र पुरुषको उमेर महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ । उमेरको अन्तर हुने स’म्बन्ध लाई सबै सुमधुर र कायम राख्नका लागि बढी उमेर हुने ब्यक्तिले जहिले पनि
December 9, 2020 admin रोचक 3861
November 29, 2020 admin रोचक 3645
हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला त खोज्छन नै महिलाहरु पनि आफू भन्दा